ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ဘ၀ခရီး၏ ကြည်နူးပျော်ရွှင်မှု မှတ်တိုင်လေးတစ်ခု
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 10:14 AM
အားကျလိုက်တာ။ :) ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်းကို ရှေ့ဆက်ရမှာဆိုတော့ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်မလည်းနော်။
ညီမလေး လင်းလက် စိတ်ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာအောင်မြင်တဲ့ ဘ၀လေးကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။ :)
ဆုတောင်းပေးချင်တယ်။ စကားလုံးလှလှလေးက ရှာမတတ်တော့ဘူး :)
ဟိုလေ ခေတ်မှီသူတိုင်း ကျောပိုးကြသည်တဲ့။ သတို့သားက သတို့သမီး ကျောပိုးတဲ့ပုံကော ရိုက်ဖြစ်သေးလား.... :D
ဝမ်းသာစရာပဲ မလင်းလက်ရေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ :)
ရေးထားတာလေးတွေဖတ်ရင်း စာရေးသူအပျော်က ရင်ဘတ်ထဲကူးစက်လာတယ်။ ကြည်နူးမိတယ်။ :)
Happy Marriage and Happy Honey Moon ဖြစ်ပါစေ ညီမလေးရေ :-)
sister.... waiting for new post naw...
ညီမလေးရေ... Congratulations... ပျော်ရွှင်ပါစေ။ :)
ကိုတက်တူ >>> ဓာတ်ပုံဆရာက ချီခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မက ကြောက်နေလို့ ခဏလေးပဲ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် :P ။
ဟိုလေ ခေတ်မှီသူတိုင်း ကျောပိုးကြသည်တဲ့။ သတို့သားက သတို့သမီး ကျောပိုးတဲ့ပုံကော ရိုက်ဖြစ်သေးလား...
ဓာတ်ပုံဆရာက ချီခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မက ကြောက်နေလို့ ခဏလေးပဲ ရိုက်ဖြစ်ပါတယ် :P ။
သတို့သမီးအရံလေးများလိုက်လုပ်လို့မရဘူးလား.. ဒါပေမဲ့ သတို့သားအရံက ချောမှနော်...
ဘာဆုတောင်းပေးရမှန်းမသိဘူး.. လိုချင်တဲ့ဆု အားလုံးပြည့်ပါစေနော်...
ညီမလေးရေ...အမှတ်တရတွေ တစ်စုတစ်ဝေးနဲ့ တစ်သက်တာအတွက် ပျော်ရွှင်မှုတွေ၊ ပြည့်စုံမှုတွေ အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော်... :)
ဟုတ်တယ်ဗျ အားကျလိုက်တာ ... :) မလင်းလက် တို့ ပျော်ရွှင်နေတာကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ပါ အပျော်တွေကူးစက်လာတယ်ဗျ။ အဝေးရောက် သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ကော အစီစဉ်ရှိဘူးလား :)
congrat...bhappy wif the ones u luv! :)
A heartful congrat to လင်းလက်!! :)
အားကျတယ်ဗျာ. ကျွန်တော့်ကားကတော့ အခုမှ စက်ရုံမှာ ဘော်ဒီထုနေတုန်းပဲ. အသည်းကွဲရုံတင်မကဘူး. ဘော်ဒီပါကွဲသွားလို့လေ. :)
Goun Goun said...
သာယာချမ်းမြေ့သော အိမ်ထောင်ရေးလေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ...
ဘ၀ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်အောင်မြင်မှုများစွာ ... စိတ်ချမ်းသာမှုများစွာ ... ဆထက်တပိုး တိုးပြီးရရှိကြပါစေလို့ ... ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွယ် ...
buffet or course dinner? i wanna eat.. :D
မလင်းလက်ရေ .. ချစ်သူနဲ့ လက်တွဲပြီး ပျော်ရွှင် ကြည်နူးဖွယ် ဘ၀လေးတခု တည်ဆောက်ရင်း အများအကျိုးပြု အလုပ်လေးတွေ ဆထက်တံပိုး ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ ... လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
I think you wanna boast abt ur wedding n honeymoon...maybcuz of ur age..neway i wish u guys gotahappy life